Sizosola uMugabe uma kulimala abantu - Tsvangirai | News24
Sizosola uMugabe uma kulimala abantu - Tsvangirai
Harare - Iqembu eliphikisayo eZimbabwe lithe lizosola uMengameli Robert Mugabe uma kuke kwalimala abantu njengoba uhulumeni wakhe uhlela ukusebenzisa amasosha ukuxosha abadayisa emgwaqeni.
Lokhu kushiwo ngumholi we-MDC uMorgan Tsvangirai ngoLwesibili.
“Kuyinto engasile ukuthi uhulumeni weZanu-PF ogcwele inkohlakalo usebenzise isandla sensimbi ezakhamuzini ezizizamelayo njengoba isimo somnotho sibheda,” kusho uTsvangirai.
OLUNYE UDABA: UTsvangirai uphebeza imibiko nge-MDC
Unkosikazi kaMugabe, uGrace, wazwakalisa ukuzwelana nabadayisi basemgwaqeni ngoMashi kulandela ukunyuka kwesibalo sabo ngenxa yokuvalwa kwenqwaba yamafemu.
Nokho kube nokuxakeka-ke ngesikhathi isikhulu seZanu-PF u-Ignatius Chombo evela kumabonakude ngoMsombuluko ethi abadayisi banikezwa izinsuku eziyisikhombisa ukuthi baqoqeokungokwabo baphume baphele emigwaqeni.